Were uru nke LightintheBox Black Friday na-enye | Akụkọ akụrụngwa
Were ohere LightintheBox Black Friday na-enye
Black Friday abụrụla otu n'ime ụbọchị kachasị atụ anya n'ime afọ maka ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ ịchekwa ego na ịzụ ahịa Krismas. Ruo oge ụfọdụ, ọ na-abụwanye ihe nkịtị ịhụ ka ụlọ ahịa ndị dị n'ịntanetị Asia Ha na-enye anyị ezigbo onyinye anyị na-agaghị achọta n’obodo anyị.
Guysmụ okorobịa si Lightinthebox, tinye n'aka anyị ọnụọgụ nke onyinye iji mee ememme Black Friday, na-enye ha anyị nwere ike ịhazi ngwa ahịa ezumike na-echekwa anyị nnukwu ego na mgbakwunye inweta ego Kupọns dịka ego anyị na-emefu iji zụta ihe n'ọdịnihu. N'ebe a, anyị na-egosi gị ụfọdụ ihe mmasi kachasị mma nke Lightinthebox na-enye anyị maka Black Friday
10 OMLỌ S8
11 OMLỌ S9
12 Akwụkwọ Ndetu Jumper Ezbook 3
13 Akwụkwọ Ndetu Jumper Ezbook 2
14 Scishion V88 igbe setịpụrụ
15 Mecool setịpụrụ n'elu igbe
Obere ihe anyị nwere ike ikwu maka Xiaomi MI A1 nke ekwurubeghị, ịabụghị otu n'ime ọdụ kacha mma anyị nwere ike ịchọta ugbu a n'etiti etiti na uru ndị anyị na-agaghị enwe ike ịchọta na ọdụ ndị ọzọ nke ma oke ma ọnụahịa yiri ya. Ọnụ nke Xiaomi Mi A1 bụ euro 177,34 na 4 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa dị n'ime.
Zụta Xiami MI A1
Ọzọ nke nnukwu ọdụ na Xiaomi na-enye anyị bụ Redmi 4A, a ọnụ ya na 2 GB nke Ram na 32 GB nke nchekwa maka naanị euro 76,38.
Zụta Xiaomi Redmi 4A Global
Nhọrọ ọzọ nke weebụsaịtị Xiaomi a na-enye bụ ụdị Redmi 4A, nke maka 5 sentimita asatọ, 2 GB nke Ram na 16 GB nke nchekwa maka naanị 68,22 euro.
Zụta Xiaomi Redmi 4A
Naanị 95,97 euro, Xiaomi na-enye anyị Redmi 4X, nke nwere ọnụ 3GB Ram, 32GB nchekwa na batrị 4.100 mAh na-enweghị njedebe maka euro 95,95.
Zụrụ Xiaomi Redmi 4X ROM Global
Mi6 na Mi MIX 2, ọnụ ahịa abụọ kachasị ike nke ụlọ ọrụ ahụ. Xiaomi Mi6 na-enye anyị a Snapdragon 835 na 6GB nke Ram na 64GB debe ha na ihuenyo 6-inch buru ibu maka euro 310,29.
Zụrụ Xiaomi Mi6
Isi Xiaomi ugbu a bụ Mi MIX 2, ọnụ ya na ihuenyo nke 5,9 sentimita asatọ, 6 GB nchekwa, 64 GB Ram, batrị 3.400 mAh batrị ma kwadoro site na Qualcomm's Snapdragon 835. Mi MIX 2 dị site na Lightinthebox maka naanị euro 409,42.
Zụta Xiaomi Mi MIX 2
DooGee nwekwara Mi MIX 2 nke ya, ngwụcha nwere ihuenyo 18L9 nke anụ ọhịa, 6 mAh batrị, 4.060 GB nke Ram na nchekwa 6 GB, ihe niile maka naanị 177,76 euro. Ọ na-ejikọkwa usoro nyocha ihu nke na-enye anyị ohere ịmeghe ọnụ, dịka anyị nwere ike ime na iPhone X
Zụrụ Doogee MIX 2
Mbelata nke Doogee MIX 2 na-enye anyị ọnụ ya 2GB Ram, 16GB n'ime nchekwa na batrị 3.080 mAh maka euro 75,05.
Zuta DOOGEE MIX Lite
LeTV na-enye anyị otu narị puku na narị abụọ na iri abụọ na ise na narị atọ na iri isii nke isii na - arụ ọrụ nke Qualcomm's Snapdragon 125,36 processor, tinyere 4 GB nke Ram na 32 GB nchekwa dị n'ime.
Zụta LeTV LeEco Le Max 2 X820
HOMTOM S8 na-enye anyị ihuenyo n'akụkụ 5,7 nke anụ ọhịa 4 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa dị n'ime. Ahịa: euro 120,67.
Zụta SLỌ S8
Nwanne nwoke nke okenye nke HOMTOM S8 bụ S8 Plus, ihe nlereanya na 4 GB Ram, 64 GB nke nchekwa na ihuenyo nke 5,99 sentimita asatọ. Ahịa: euro 161,61.
Zụta SLỌ S9
Akwụkwọ Ndetu Jumper Ezbook 3
Jumper EzBook 3 bụ akwụkwọ ndetu nke Intel Apollo processor jikwaa 6 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa n'ime naanị euro 169,73.
Zụta Akwụkwọ Jumper Ezbook 3
Akwụkwọ Ndetu Jumper Ezbook 2
Jumper Exbook 2 bụ ụdị dị ọnụ ala karịa nke usoro gara aga, nke Intel Z8350 processor jikọtara ya 4 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa n'ime maka euro 132,22.
Zuta Akwụkwọ ndetu Umper Ezbook 2
Scishion V88 igbe setịpụrụ
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnụ ụtọ igbe set-top nwere ike ịlele nkwanye ọdịnaya site na TV, anyị nwere ike ịnweta Scishion V88, ngwaọrụ nwere 1 GB nke Ram na 8 GB nke nchekwa maka naanị euro 17,35 na-erite uru na koodu ego LITBM8S mgbe ị na-azụ ihe.
Zụrụ Set-top igbe Scishion V88
Mecool setịpụrụ n'elu igbe
Mecool si set-top igbe na-enye anyị ihe gam akporo TV na 3 GB nke Ram na 16 GB nke nchekwa dị n'ime maka 44,35 na koodu ego LITBM8S.
Zụrụ Mecook Setịpụ igbe dị elu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Were ohere LightintheBox Black Friday na-enye
Xiaomi ga-ere 50 smartphones maka 1 euro n'oge mbụ Black Friday na Spain
Samsung Galaxy S9 nwere ike igosi ya n'oge CES 2018